Iyintoni intengo efanelekileyo yomatshini wokucoca oomileyo ukuthenga?
Iyintoni intengo efanelekileyo yokucoca abacolileyo ukuthenga? Ukuvula abacocekileyo abomileyo, ukuba ufuna ixesha elide, kufuneka ube neyona mveliso ebalulekileyo yokucoca, ukuba akukho mveliso ephezulu yokucoca i-dryers, kwanokuba i-teknoloji kunye nokuhlamba iimpahla kungekho nto.
Ukusetyenziswa kwabathengi kumatshini ahlambulukileyo, baya kugxininisa ngakumbi kwiingubo kunye nabacoceli abomileyo bendawo yokuhlambulula umgangatho, njengoko inkxaso ephezulu yokucoca ixhobo ziza kuba neenembile ukubona abasebenzisi. Ngoko, izixhobo zokucoca ezinomileyo ukuqinisekisa ukuba iingubo ze-XiJingDu kunye nee-degouring degrees, abathengi nokuba ngaba kukuvumba umvumba emva kokuhlamba, iimpahla zixhalabele kakhulu kwimicimbi enjenge-deformation eyenzekayo.
Abacocisi abacobileyo kufuneka bajolise ekuhlambuleni ukusebenza kwezinto zokusebenza zokucoca ezinomileyo, ukuhlamba kunye nokucoca ixabiso lempahla yokucoca ixabiso. Yintoni ekuthengeni ixabiso elincinci lempahla yokucoca, lingaqwalasela ukusetyenziswa kwezixhobo zokusebenza kunye neendleko zotyalo-mali. Okubaluleke ngakumbi, izixhobo zokucoca ezinomileyo azikwazi ukubonakala zivumba elithozamisayo, ukuguqulwa kwezambatho, njalo njalo njalo njalo.
Ngoko ke ukuthenga ntoni
Uhlobo lokukhusela ulondolozo lwezityalo oomatshini ococekileyo u-ENEJEAN ucoceko lwempilo yokucoca
Abacoci abamisayo? Ukuthetha ngokunyanisekileyo, umcuphi osebenzayo wokucoca umatshini kunye nomthengisi wezinto zokusebenza unokubanelisa abatyalo-mali ukuba bahlambulule izixhobo zokusebenza zokucoca nokusetyenziswa kwexabiso. Ngokuqwalasela ukugcinwa kwezixhobo kunye nokusetyenziswa kwephulo loxinzelelo oluphuthumayo, umenzi unokunika iinkonzo ezichanekileyo kunye nenkonzo.
Ukuxhomekeka kwizixhobo zokucoca oomatshini abomileyo ukuba banikele iinkonzo zengcali, endaweni yokujoyina uqeqesho oluzimeleyo, uphando oluphambili lokucoca uphuhliso nophuhliso, kunye nexabiso elifanelekileyo kubatyalomali ukubonelela ngeenkonzo ezicoca kakuhle zokucoca. Ukususela ekuphuhliseni ishishini, abahlambululi abomileyo, ii-franchisees kunye nabathengi abahlala emithathu, becinga ukuba ekugqibeleni banikeze abathengi ngeenkonzo zokuhlamba ezinokuhlawulekayo, banelise abafuna ukuhlamba impahla. Leli qela le-ENEJEAN lamazwe ngamazwe lihlangene nokuphuhliswa kwinqanaba elisisiseko lokuphila.
Ukusetyenziswa kwabahlambli abomileyo akusiyo abacoca abacocekileyo abasebenza bodwa, nabo bafuna umququzi, umshini wokunxilonga, umbane wombane kunye nensimbi kunye nezixhobo zokusebenza ezihambelanayo. UKUHLOLA ukucoca okumileyo ukujoyina inkampani ukwenza iziphakamiso ezifanelekileyo kubatyalo-mali, ubukhulu obuhlukeneyo bokuhlambulula abomileyo ukubonelela ngeeskimu ezahlukeneyo zokucwangcisa, ubuncinane be-15 ezahlukeneyo zokutshala imali, ngokuncinane nje kuphela ukufunwa kwe-30000 RMB. kwimizi engaphezu kwama-500.
Kwabakho abatyali-mali, amandla otyalo-mali azinzileyo I-ENEJEAN yokujoyina ikhenketho iya kuba abatyali-mali ngokubhekiselele kumatshini ahlambulukileyo acoca ukucoca kunye neemeko zokunika iziphakamiso zokwenza izigqibo, ukhetho lwezoqoqosho kunye noluncedo kubalimi-mali abomile ukucoca izixhobo ezinxulumene nokucoca, ukuhlangabezana nemisebenzi yokucoca .
Inqaku lokugqibela: Ziziphi izixhobo ezisisiseko k...
Inqaku elilandelayo: Ixabiso lomshini omkhulu wokuc...